Micro-michato: Iyo yemberi maitiro mune Mexico Caribbean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Micro-michato: Iyo yemberi maitiro mune Mexico Caribbean
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Mexico News • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mumakore matatu apfuura, chidimbu cherudo chakakura padanho rinokurumidza mudunhu reMexicoan Caribbean
Mexican Caribbean yakagashira vangangoita makumi mapfumbamwe emichato pagore pasati paitika denda razvino
Mhemberero diki dzave kuwedzera
Micro-michato, mashoma, uye elopement zvinoramba zvichiitika
Sezvo michato-michato, zvidiki, uye zvigaro zvichiramba zvichiitika, Mexican Caribbean nenzvimbo dzayo dzekurota zviri pakati peakanakisa ekupemberera rudo nenzira yakachengeteka uye isingakanganwike, kubva kumakungwa uye kumahombekombe ari kure kusvika kumagadzirirwo ari pasi pemvura.
Mumakore matatu apfuura, chidimbu cherudo chakakura nekumhanyisa mhanyisa mudunhu. Iyo Mexican Caribbean yakagamuchirwa ingangoita 90,000 michato pagore uye avhareji vashanyi makumi mashanu pamuchato pamberi penjodzi yazvino. Iye zvino sezvo mhemberero diki dziri kuwedzera, nzvimbo dzakadai seBacalar, Cozumel, Puerto Morelos, Riviera Maya, uye Tulum ndiyo sarudzo huru yemuchato unoenda kunzvimbo dzinopisa.
"Nekuchengetedzwa kwevagari venzvimbo nevashanyi sekukoshesa, nzvimbo dzatakashandura dzakachinja marongero edu emuchato, padiki padiki," akadaro Dario Flota, director weQuintana Roo Tourism Board. "Kubwinya kwechisikigo kweMexicoan Caribbean kunopa mamaira enzvimbo yekunze kune vakaroora vanotsvaga mutambo wekupisa."